Abavelisi basemva kwendawo yokuhlanjwa kwamanzi | Indawo
1. I-Ballproof yamanzi egqityiweyo yokhuselo lwamanzi ukuqinisekisa ukuba igiya yakho iyomile ngokupheleleyo ngelixa ihamba, ukuhamba ngebhayisekile, ukuhamba, ukuhamba ngeenyawo, ukuhamba ngeenyawo, nokuloba.
2. I-Ballpack yasemva kwe-Ballpack ilula ukuyisebenzisa, yenzelwe ngokuvalwa okuphezulu okanye i-rop-toricing eqondakalayo ukuqinisekisa ukuba amanzi ahlala ngaphandle. Sula nje ibhegi ezantsi amaxesha ama-3-4, i-buckle, kwaye uyonwabele ixesha lakho
3. Ininzi yokugcina indawo, ixhotywe ngeepokotho ngaphakathi nangaphandle kwengxowa. I-chipper enkulu-infipper ngaphandle kwe-Greb ekhawulezayo kwaye ihambe izinto, kunye nepokotho ezakhiweyo, i-meshing,&iringi ephambili ngaphakathi.
4. I-Bandroof yamanzi e-Waterproof ikhuselekile ukuba ihambe ihambo: I-Compact -ightsweightweight yePhatha elula kwinqwelomoya& Iqela lokuvalwa kwexabiso eliphezulu libonelela ngokhuseleko lokugqibela xa usehamba. I-D-RITS efanelekileyo iqhotyoshelwe kuyo yomibini imitya yegxalaba kwaye ichithe zombini zibonelela ngamanqaku e-Anchor ukuya kwi-latch kwi-latch kwi-cheating okanye ukuhamba ngebhayisekile.
5. Yakhelwe i-Councy: yakhiwe ngephaneli ye-ergonomic ye-ergonomic, yaqinisa imitya eguqukayo ephakathi, kunye neprofayile ye-sternum ephantsi ebonelela ngemfundiso yokugqibela ngokuthatha ubunzima bakho. Ukongeza, i-selt enzima-yebhanti inciphisa uxinzelelo longezwa ukunceda ukuxhasa umthwalo wakho.
Okokugqibela, fumana i-backproof yamanzi, kwaye ikunike ixabiso lokukhetha.